ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်း 20 ရှိ အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးမှု - ယေရှုခရစ်၏ ဗျာဒိတ်တော်
ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်း 20 ရှိ အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးမှု
မတ္ ၁၂၊ ၂၀၂၂ မတ္ ၂၂၊ ၂၀၁၉ အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး 20 ၏နှစ် 1,000 စိုးစံမှုကို အဓိပ္ပာယ်ပြန်ဆိုခြင်း၏ ဘာသာရေးခေတ်မီနည်းကို “အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးခြင်း” ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် အကြိမ်များစွာ ခေါင်းစဉ်တပ်ခဲ့သည်။ ဤသရုပ်ဖော်ပုံတွင် ပုံစံနှစ်မျိုးရှိသော်လည်း အများစုမှာ သန့်ရှင်းသူတို့၏ “ပီတိ” နှင့် ဆင်းရဲဒုက္ခအပြီး မြေကြီးပေါ်ရှိ ယေရှုခရစ်၏ မြေကြီးပေါ်ရှိနိုင်ငံတော်အဖြစ် ဤ “အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးခြင်း” ကို ပုံဖော်ထားသည်။
Wikipedia မှ- “ဆင်းရဲခြင်းအကြို ပီတိဓမ္မပညာသည် တဆယ့်ရှစ်ရာစုတွင် စတင်ခဲ့ပြီး Puritan တရားဟောဆရာများ တိုးမြင့်လာပြီး Cotton Mather ဖြင့် 1830 ခုနှစ်များတွင် John Nelson Darby နှင့် Plymouth Brethren တို့က ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရေပန်းစားခဲ့ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ 20 ရာစုအစောပိုင်းက Scofield အကိုးအကား သမ္မာကျမ်းစာ။”
မှတ်ချက်- “အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးမှု” နှင့် “ပီတိ” ဟူသော ဝေါဟာရများသည် ကျမ်းဂန်များတွင် မရှိပါ။ ဤအသုံးအနှုန်းများကို မြေကြီးဆိုင်ရာနိုင်ငံတော် အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးမှု သွန်သင်သူများမှ ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။ လူအများစုသည် ဤအသုံးအနှုန်းများကို ကြားဖူးနားဝရှိကြပြီး ၎င်းတို့သည် သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် အမှန်တကယ်ရှိသည်ဟု ယူဆကြပြီး ကျမ်းချက်များကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အတွက် ဘယ်သောအခါမှ စစ်ဆေးခြင်းမရှိပေ။ ထို့ကြောင့် သင်ယုံကြည်သင့်သောအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကောက်ချက်မဆွဲမီ ၎င်းတို့၏မူရင်းအကြောင်းအရာအပြည့်အစုံဖြင့် ကျမ်းဂန်များကို စတင်ဖတ်ရှုရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
အနှစ်တစ်ထောင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံတော်အုပ်စိုးမှုသည် ခရစ်ယာန် “တစ်ထောင်နှစ်တစ်ထောင်ဝါဒီများ” ဟု ယောင်ဆောင်မည့်သူများနှင့်သာ ထူးခြားသည်မဟုတ်။ ၎င်း၏အမြစ်များကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဘာသာတရားအများစုတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဘာသာတရားအများစုတွင် တည်ရှိနေသော အဓိကအချက်မှာ ကမ္ဘာမြေကြီး၌ မကောင်းမှု စွမ်းအားများ ဖျက်ဆီးခံရပြီး ကမ္ဘာမြေကြီး၌ ငြိမ်းချမ်းသော ကာလကြာရှည်စွာ ဖျက်ဆီးခံရမည့် အချိန်ကာလတစ်ခု ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
Apocryphal Books တွင် မည်သည့်ဂိုဏ်း၏ ထင်မြင်ချက် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကို မည်ကဲ့သို့ ပိုင်းခြားထားသည်အပေါ် မူတည်၍ စာအုပ် ခုနစ်အုပ်မှ ဆယ့်လေးအုပ် ပါဝင်သည်။ ရိုမန်ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျသည် ၎င်းတို့ထဲမှအချို့ကို ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ အခြားသော ပရိုတက်စတင့်များက ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့ကို "ကိုးကား" အမျိုးအစားအဖြစ် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ ၎င်းတို့အားလုံး၏ စာရင်းဖြစ်သည်။
1 Esdras (ဗားလ်ဂိတ်3Esdras)
2 Esdras (ဗားလ်ဂိတ်4Esdras)
Judith (ဂျနီဗာရှိ "Judeth")
ကျန်ဧသတာ (ဗာလဂိတ် ၁၀:၄ – ၁၆:၂၄)
Ecclesiasticus (Sirach ဟုလည်းလူသိများသည်)
ဗာရုတ်နှင့် ယေရမိ၏စာ (ဂျနီဗာရှိ “ယေရမိ”) (ဗူလ်ဂိတ်ဗာရုတ်၏ အစိတ်အပိုင်းအားလုံး)
ကလေးသုံးယောက်၏သီချင်း (Vulgate Daniel 3:24-90)
Susanna ၏ပုံပြင် (Vulgate Daniel 13)
၎င်းတို့သည် စစ်မှန်သောကျမ်းဂန်ကျမ်းဂန်၏ အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်သောကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာ၏ သင့်လျော်သောအစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ပေ။ ဤ Apocryphal စာအုပ်များတွင် ဘုရားသခင်၏လူများ အုပ်ချုပ်မည့် စကြဝဠာမြေကြီးငြိမ်းချမ်းမှုအချိန်ကာလ၏ ခန့်မှန်းချက်များပါရှိသည်။ ဤမှန်းဆချက်စာအုပ်များတွင်သာ အချို့သောခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့် ဆက်စပ်နေသော အနှစ် ၁,၀၀၀ မြေကြီးဆိုင်ရာနိုင်ငံတော်၏ အယူဝါဒကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သည်။
သို့သော် ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသူများ၏ထင်မြင်ယူဆချက်ကို ကြားသိရသောကြောင့် ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ ယေရှု ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောခဲ့သည့်စကားကို အချိန်ယူနားထောင်ကြပါစို့။
“ယေရှုကလည်း၊ ငါ့နိုင်ငံသည် ဤလောကနှင့်မစပ်ဆိုင်။ ငါ့နိုင်ငံသည် ဤလောကနှင့် စပ်ဆိုင်လျှင်၊ ယုဒလူတို့လက်သို့ ငါမအပ်ခြင်းငှာ၊ ငါ့ကျွန်တို့သည် စစ်တိုက်ကြလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း၊ ယခုမူကား၊ ငါ့နိုင်ငံသည် ထိုအရပ်မှမဟုတ်၊ ပိလတ်မင်းကလည်း၊ သို့ဖြစ်လျှင် သင်သည် ရှင်ဘုရင်မှန်သလော။ ယေရှုက၊ သင်သည် ငါသည် ရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟု ဆို၏။ ဤအကြောင်းကြောင့် ငါသည် မွေးဖွားလာ၍ သမ္မာတရားကို သက်သေခံခြင်းငှာ ဤအကြောင်းကြောင့် ဤလောကသို့ ငါကြွလာ၏။ သမ္မာတရားနှင့် ပြည့်စုံသောသူတိုင်း ငါ့စကားသံကို ကြား၏။ ~ ယောဟန် ၁၈:၃၆-၃၇
ယနေ့ ယေရှု၏အသံကို သင်ကြားပါသလား။ သူ၏နိုင်ငံသည် ဤလောကနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ဘယ်တုန်းကမှ မဖြစ်ခဲ့သလို ဘယ်တော့မှ ဖြစ်မလာဘူး။
ဂျူးတို့၏မျှော်လင့်ချက်သည် မြေကြီးဆိုင်ရာနိုင်ငံတော်တွင် လွှမ်းခြုံထားသည်။ သခင်ယေရှုအတွက် အသေခံခဲ့သော ဝိညာဉ်ရေးနိုင်ငံတော်ကို သူတို့ နားမလည်ခဲ့ကြပါ။ သခင်ယေရှု၏အသေခံခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဝိညာဉ်ကို ကယ်တင်ခြင်းရရှိစေသည်- အပြစ်အားလုံးမှ ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့် လွတ်မြောက်ခြင်း! ဤသည်မှာ အတွင်း၌ရှိသော ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ဖြစ်သည်။
“ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော် ကြွလာသောအခါ၊ ဖာရိရှဲတို့ထံ တောင်းလျှောက်သောအခါ၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် မျက်မှောက်ပြုလျက် မရောက်၊ ဤအရပ်၌ ကြွလာသည်ဟု မဆိုရကြ။ ဒါမှမဟုတ် ဟိုမှာ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် သင်တို့အထဲ၌ရှိ၏။” ~ လုကာ ၁၇:၂၀-၂၁
သို့ရာတွင် မြေကြီးဆိုင်ရာနိုင်ငံတစ်ခု၏ “တွေးတောခြင်း” သည် ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့မတိုင်မီအထိ၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တန်ခိုးဖြင့် သခင်ဘုရား၏တမန်တော်များနှင့် တပည့်များကို လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့မတိုင်မီ၊ သူတို့ (ယနေ့ခေတ်တွင် အနှစ်တစ်ထောင်သောနိုင်ငံတော်များကဲ့သို့) သူတို့သည် မြေကြီးဆိုင်ရာနိုင်ငံတော်တစ်ခု၏ အနာဂတ်အချိန်ကို အလေးထားခဲ့ကြသည်။ သခင်ယေရှုက ထိုကိစ္စကို မစိုးရိမ်ကြနှင့်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများသည် ဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်း လည်ပတ်ကြသည်။ သို့ရာတွင်၊ သခင်ဘုရား၏ တမန်တော်များနှင့် တပည့်များသည် မြေကြီးမဟုတ်သောနိုင်ငံတော်၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်တွင် တန်ခိုးကို ရရှိကြလိမ့်မည်။
စည်းဝေးသောအခါ၊ သခင်၊ ဤအချိန်၌ ကိုယ်တော်သည် ဣသရေလအမျိုး၌ နိုင်ငံတော်ကို တဖန်ပြန်ပေးမည်လောဟု မေးလျှောက်ကြလျှင်၊ ခမည်းတော်သည် မိမိတန်ခိုး၌ သွင်းထားတော်မူသော အချိန်ကာလ၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဆင်းသက်ပြီးနောက် သင်တို့အပေါ်သို့ တန်ခိုးအာဏာကို ခံရကြလတံ့။ ယေရုရှလင်မြို့၊ ယုဒပြည်၊ ရှမာရိပြည်နှင့် မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် သင်တို့သည် ငါ့အား သက်သေခံကြလိမ့်မည်။” ~ တမန်တော် ၁:၆-၈
ထို့နောက် ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့ပြီးနောက်၊ သခင်ဘုရား၏ တမန်တော်များနှင့် တပည့်တော်များသည် သခင်ယေရှုလုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်း တရားဟောရန် နေရာတိုင်းသို့ သွားကြသည်။ ယေရှုသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဝိညာဏနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရန်နှင့် မြေကြီးဆိုင်ရာဣသရေလနိုင်ငံတော်ကို အာရုံစိုက်ခြင်းမပြုရန် ယေရုရှလင်မှထွက်ခွာရန် ၎င်းတို့၏အာရုံစိုက်မှုကို ပြန်လည်အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။
“ပေါလုသည် မိမိငှါးထားသောအိမ်၌ နှစ်နှစ်ပတ်လုံးနေ၍၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို ဟောပြောလျက်၊ သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်စပ်လျဉ်းသော အရာတို့ကို ယုံကြည်စွာ ဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်၊ အထံတော်သို့ ဝင်သမျှသောသူတို့ကို လက်ခံ၍၊ ~ တမန်တော် ၂၈:၃၀-၃၁
ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် “ယခု” ဖြစ်သည်ကို ယေရှု အကြိမ်များစွာ သွန်သင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး ယင်းထဲသို့ဝင်ရန် သင်သည် အပြစ်၏နောင်တကို အပြည့်အဝရရန် လိုအပ်သည်။
“ယောဟန်ထောင်ကျပြီးနောက် ယေရှုသည် ဂါလိလဲပြည်သို့ကြွလာ၍ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်ဆိုင်သော ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောလျက်၊ အချိန်စေ့ပြီ၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ရောက်လုနီးပြီ၊ နောင်တရ၍ ဧဝံဂေလိတရားကို ယုံကြည်ကြလော့။” ~ မာကု ၁:၁၄-၁၅
ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် ထိုအချိန်ကတည်ရှိခဲ့ပြီး၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည် ထာဝရတည်မြဲသောဝိညာဉ်ရေးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် “အချိန်ပြည့်ပြီ” ဟုဆိုသည်။ ခရစ်တော်သည် သူ့ကိုချစ်သောသူတို့၏ စိတ်နှလုံးတွင် ဘုရင်အဖြစ် စိုးစံနေပြီဖြစ်သည်။
“ထိုနောက်မှ၊ မြို့ရွာအရပ်ရပ်တို့ကို လှည့်လည်၍ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်ဆိုင်သော ဝမ်းမြောက်စရာသိတင်းကို ဟောပြော၍ တကျိပ်နှစ်ပါးသော သူနှင့်အတူရှိတော်မူ၏။”—လုကာ ၈:၁။
သခင်ယေရှုနှင့်ပတ်သက်သော တစ်ခုတည်းသောနိုင်ငံတော်မှာ ကိုယ်တော်ပိုင်ဖြစ်သည်။ စာတန်အပေါ် သူ၏တန်ခိုးအာဏာသည် ထိုအချိန်တွင် သူ၏နိုင်ငံတော်အာဏာကြောင့်ဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
“သူတို့၏အကြံအစည်ကို သိတော်မူလျှင်၊ အိမ်တအိမ်နှင့် တအိမ်ပြိုကျ၏။ စာတန်သည်လည်း မိမိနှင့် ကွဲပြားလျှင် သူ၏နိုင်ငံသည် မည်သို့ရပ်တည်မည်နည်း။ ဗေလဇေဗုလအရပ်၌ နတ်ဆိုးတို့ကို ငါနှင်ထုတ်သည်ဟု သင်တို့ဆိုသောကြောင့်၊ ငါသည် ဗေလဇေဗုလအားဖြင့် နတ်ဆိုးတို့ကို နှင်ထုတ်လျှင်၊ သင်၏သားတို့သည် အဘယ်သူကို နှင်ထုတ်သနည်း။ ထိုကြောင့်၊ သူတို့သည် သင်တို့၏ တရားသူကြီးဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ ငါသည် ဘုရားသခင်၏ လက်ညှိုးတော်ဖြင့် နတ်ဆိုးများကို နှင်ထုတ်လျှင် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် သင့်အပေါ်သို့ ရောက်ရှိလာမည်မှာ သေချာပါသည်။” ~ လုကာ ၁၁:၁၇-၂၀
နတ်ဆိုးများသည် လူတို့၏စိတ်နှလုံးထဲမှ နှင်ထုတ်ခံရသောကြောင့်၊ ယေရှု၏နိုင်ငံတော်သည် တည်ရှိနေပြီး၊ ဤလူမျိုးသည် ထိုပြည်ထဲသို့ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။
“ပညတ္တိကျမ်းနှင့် ပရောဖက်တို့သည် ယောဟန်တိုင်အောင် ရှိခဲ့သည်ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် ထိုကာလမှစ၍ ဟောပြောသဖြင့်၊ ~ လုကာ ၁၆:၁၆
ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် ဝိညာဉ်ရေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ မြေကြီးဆိုင်ရာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ဤနေရာ၌ ဥစ္စာရှာခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မစိုးရိမ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အား ယေရှု အထူးသွန်သင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၊ မြေကြီးပေါ်ရှိအရာများကို ရရှိနိုင်သည်ထက် မိမိတို့၏စိတ်နှလုံးတွင်ရှိသော အရာများကို ဂရုစိုက်ကြရန် လူတိုင်းကို ကိုယ်တော် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
“အဘယ်သို့ စားရပါမည်နည်း၊ သောက်ရမည့်အရာကို မရှာကြနှင့်၊ ယုံမှားသံသယစိတ်မရှိကြနှင့်။ အကြောင်းမူကား၊ ဤအရာအလုံးစုံတို့ကို လောကီနိုင်ငံမှ တပါးအမျိုးသားတို့သည် ရှာတတ်ကြ၏။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို သာ၍ရှာကြလော့။ ဤအရာအလုံးစုံတို့ကို သင်တို့၌ ထပ်လောင်းရလိမ့်မည်။ သိုးစုငယ်၊ မစိုးရိမ်နှင့်။ နိုင်ငံတော်ကို ပေးသနားခြင်းငှာ သင်တို့အဘသည် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်တော်မူ၏။ ဥစ္စာကိုရောင်း၍ ဆွမ်းလှူပါ။ သူခိုးမချဉ်း၊ ပိုးရွမဖောက်ပြန်သော ကောင်းကင်ဘုံ၌ ဘဏ္ဍာတိုက်၊ မဟောင်းသေးသော အိတ်တို့ကို ပေးကြလော့။ သင်၏ဘဏ္ဍာသည် အဘယ်မှာရှိသနည်း၊ သင်၏နှလုံးသည်လည်း ရှိလိမ့်မည်။” ~ လုကာ ၁၂:၂၉-၃၄
သို့ဆိုလျှင် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် အဘယ်အရာနှင့်တူကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာက သွန်သင်သနည်း။
“ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် အမဲသားနှင့် သောက်စရာမဟုတ်၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ ဝမ်းမြောက်ခြင်းမူကား၊” ~ ရောမ ၁၄:၁၇
တဖန်၊ ၎င်းသည် ဝိညာဉ်ရေးရာနိုင်ငံဖြစ်သောကြောင့်၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဲ့သို့သော ဝိညာဉ်ရေးရာအရာများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ တန်ခိုးနှင့် အခွင့်အာဏာသည် အပြစ်၏တန်ခိုးနှင့် စာတန်ကို ၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးထဲမှ ထုတ်ယူကာ သားသမီးများ၏ဘဝများကို ပြောင်းလဲပေးသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည်။
“အလင်း၌ သန့်ရှင်းသူတို့၏ အမွေကို ဆက်ဆံခြင်းငှာ ငါတို့ကို တွေ့ကြုံစေတော်မူသော ခမည်းတော်၏ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းလျက်၊ ငါတို့ကို မှောင်မိုက်၏ တန်ခိုးမှ ကယ်နှုတ်၍ ချစ်လှစွာသော သားတော်၏နိုင်ငံတော်သို့ ပြန်ပေးတော်မူသော အရှင်” ~ ကောလောသဲ ၁။ ၁၂-၁၃
ယေရှုသည် နိုင်ငံတော်အား ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာအရာများနှင့် ထပ်ဆင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်– လူတစ်ဦးချင်းစီ၏စိတ်နှလုံးတွင် အလွန်ကြီးမားကြီးထွားနိုင်သည့် မုန်ညင်းစေ့ငယ်တစ်ခုအနေနှင့် ယုံကြည်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သေးငယ်သော တဆေးကဲ့သို့ပင်၊ သို့သော် နောက်ဆုံးတွင် တဆေးလုံး ထွက်လာသည်။ ဤအရာများသည် သခင်ကိုချစ်သောသူများ၏ စိတ်နှလုံးတွင် ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာအရာများဖြစ်သည်။
“ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကား အဘယ်သို့နည်း။ ငါဘယ်ပုံနဲ့တူရမှာလဲ မုန်ညင်းစေ့တစ်စေ့နှင့်တူ၏။ ကြီးပွား၍ ကြီးစွာသောအပင်ကို ပွားလေ၏။ မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည် အကိုင်းအခက်၌ နေရာကျကြ၏။ တဖန်တုံ၊ ငါသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို အဘယ်သို့ပုံပြရမည်နည်း။ တဆေးကို မိန်းမယူ၍ တဆေးသုံးတင်း၌ ဝှက်ထားသော တဆေးနှင့်တူ၏။ ~ လုကာ ၁၃:၁၈-၂၁
ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၏ ဝိညာဉ်ရေးရာကို ပိုမိုအလေးပေးဖော်ပြရန်၊ ယေရှုသည် အထက်မှဝိညာဉ်ရေးအရ မွေးဖွားလာခြင်းမရှိပါက နိကောဒင်ကို နားလည်ရန် သို့မဟုတ် မြင်နိုင်သောလမ်းမရှိကြောင်း နိကောဒင်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောခဲ့သည်။ ဝိညာဉ်ရေးနိုင်ငံတစ်ခုသို့ ဝင်ရောက်ရန် သင်သည် ဝိညာဉ်ရေးမွေးဖွားမှုတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။
“ယေရှုကလည်း၊ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ လူသည် တဖန်မွေးဖွားခြင်းမှတပါး၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို မမြင်ရဟု မိန့်တော်မူ၏။ နိကောဒင်ကလည်း၊ လူသည် အသက်ကြီးသောအခါ မည်ကဲ့သို့ မွေးဖွားနိုင်သနည်း။ အမိဝမ်းထဲသို့ ဒုတိယအကြိမ်ဝင်၍ မွေးဖွားနိုင်သလော။ သခင်ယေရှုက၊ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ လူသည် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်မှ မွေးဖွားသည်မှတပါး၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ မဝင်ရဟု မိန့်တော်မူ၏။ ဇာတိပကတိမှ မွေးဖွားသောအရာသည် အသားဖြစ်၏။ ဝိညာဉ်တော် ဖွားမြင်သော အရာကား ဝိညာဉ်ဖြစ်၏။ သင်တို့သည် တဖန်မွေးဖွားရမည်ဟု ငါဆိုသည်အတိုင်း မအံ့ဩနှင့်။" ~ ယောဟန် ၃:၃-၇
နောက်ဆုံးနေ့တွင်၊ ယေရှုသည် ရှိပြီးသားနိုင်ငံကို ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ထံ အပ်နှံမည်ဖြစ်သည်။ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည် မြေကြီးဆိုင်ရာနိုင်ငံတော်ကဲ့သို့ မြေကြီးဆိုင်ရာအရာများကို အလိုမရှိပေ။ လူတို့၏စိတ်နှလုံးသည် သူတို့အတွက် အသေခံတော်မူသော သားတော်ကို ချစ်မြတ်နိုးရိုသေစေလိုသည်။
“ထိုအခါ၊ သူသည် ခမည်းတော်တည်းဟူသော ဘုရားသခင်ထံတော်၌ နိုင်ငံတော်ကို အပ်နှံသောအခါ အဆုံးသည် လာလိမ့်မည်။ အုပ်စိုးရှင်အပေါင်းတို့နှင့် အခွင့်အာဏာရှိသမျှတို့ကို ပယ်ရှင်းသောအခါ၊ ~ ၁ ကောရိန္သု ၁၅:၂၄
မြေကြီးပေါ်ရှိ အုပ်စိုးမှု၊ အခွင့်အာဏာနှင့် တန်ခိုးအားလုံးကို မီးအိုင်ထဲသို့ ချပစ်လိမ့်မည်။
“အသက်စာစောင်၌ ရေးထားသော မတွေ့သောသူမည်သည်ကား မီးအိုင်ထဲသို့ ချပစ်ခြင်းခံရ၏။” ~ ဗျာဒိတ် ၂၀:၁၅
ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး 20 တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုင်ငံတော်ထဲသို့ဝင်ရသော ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့် စမ်းသပ်မှုများအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဤဆင်းရဲဒုက္ခကာလတွင် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်ရေးနိုင်ငံတော်သည် အထူးသဖြင့် ကမ္ဘာမြေကြီးတွင်တည်ရှိသည့်နေရာဖြစ်သည်။
“တပည့်တော်တို့၏ ဝိညာဉ်ကို ခိုင်ခံ့မြဲမြံစေလျက်၊ ယုံကြည်ခြင်း၌ တည်ကြည်ရန် သူတို့ကို တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် များစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခကို ကျော်ဖြတ်၍ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်ရမည်” ~ တမန်တော် ၁၄:၂၂
“ငါယောဟန်သည် သင်တို့၏ညီဖြစ်လျက်၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ၌လည်းကောင်း၊ ယေရှုခရစ်၏နိုင်ငံတော်၌လည်းကောင်း၊ သည်းခံခြင်း၌လည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ယေရှုခရစ်၏သက်သေခံချက်အတွက်လည်းကောင်း ပါမုတ်ဟုခေါ်သော ကျွန်း၌ရှိခဲ့သည်။ ~ ဗျာဒိတ် ၁:၉
“ယခုပင် ကယ်တင်ခြင်း၊ ခွန်အားနှင့် ငါတို့ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၊ ခရစ်တော်၏တန်ခိုးတော်သည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ လာပါပြီဟု ကြီးသောအသံကို ငါကြားရပြီ။ အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့၏ဘုရားသခင်နေ့မတိုင်မှီ၊ ငါတို့ညီအစ်ကိုတို့ကို စွပ်စွဲသော သူသည် နှိမ့်ချခြင်းခံရပြီ။ နှင့် ည။ သိုးသငယ်၏အသွေး၊ သက်သေခံချက်စကားအားဖြင့်၊ သေသည်တိုင်အောင် အသက်ကို မချစ်ကြ။” ~ ဗျာဒိတ် ၁၂:၁၀-၁၁
အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးမှု၏ ခေတ်သစ်အယူအဆများသည် နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောဆိုသည့် ကျမ်းချက် ၁၈ စောင်ကို ကိုးကားသည်။ သို့သော် နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောသူ 100 ကျော်ရှိပြီး (ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး 20 တွင်) သည် အနှစ် 1,000 စိုးစံခြင်းအကြောင်းကို တစ်ခုတည်းသာပြောပါသည်။ အနှစ် 1,000 စိုးစံခြင်းကို ခရစ်ယာန်များ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းနှင့် ခရစ်တော်အတွက် အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းကာလဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။ သူတို့သည် ဆင်းရဲဒုက္ခခံနေကြရသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် ခရစ်တော်အပေါ် သစ္စာရှိပြီး စစ်မှန်သောကြောင့် “ခရစ်တော်နှင့်အတူ စိုးစံခြင်း” အဖြစ် ဗျာဒိတ်ကျမ်းက ဖော်ပြသည်။
“ထိုအခါ ပလ္လင်တော်တို့ကို ငါမြင်၍ သူတို့အပေါ်၌ ထိုင်၍ တရားစီရင်ခြင်းကို ခံရသောအခါ၊ ယေရှု၏သက်သေအတွက်၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်၊ သားရဲကို မကိုးကွယ်ဘဲ ခေါင်းဖြတ်ခံရသော သူတို့၏ ဝိညာဉ်များကို ငါမြင်ရ၏။ သူ၏ရုပ်တုကိုလည်းကောင်း၊ နဖူးပေါ်၌လည်းကောင်း၊ ခရစ်တော်နှင့်အတူ အနှစ်တစ်ထောင် အသက်ရှင်၍ စိုးစံကြ၏။” ~ ဗျာဒိတ် ၂၀:၄
ဤသည်မှာ ခရစ်ယာန်စစ်များကို ဖျက်ဆီးရန် “သားရဲနှင့်တူသော” ခရစ်ယာန်ဘာသာအတု၏ တန်ခိုးကို စာတန်အသုံးပြုမည့် သမိုင်းတွင်သည့်အချိန်ကို ပြသနေသည်။ ၌ ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၂၀ တွင် ယေရှုသည် မှတ်တမ်းကို ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းတင်နေပါသည်။ အလယ်ခေတ် (အမှောင်ခေတ်) ၏ အနှစ်တစ်ထောင်အတွင်း ချာ့ခ်ျအတုသည် ခရစ်ယာန်စစ်များကို ညှဉ်းပန်းရန် “ဘုရားကျောင်း” ၏ ဖုံးအုပ်မှုကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြသနေသည်။. သို့သော် ယေရှုသည် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရသော ခရစ်ယာန်များ၏ စိတ်နှလုံးအတွင်းတွင် ဘုရင်အဖြစ် စိုးစံနေသည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှု၏နိုင်ငံတော်သည် ဤအနှစ်တစ်ထောင်အတွင်း အောင်နိုင်ဆဲဖြစ်သည်။
ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ပေါလုသည် ဤနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအမျိုးအစားကို ပရောဖက်ပြုခဲ့ပြီး စစ်မှန်သောသစ္စာရှိခရစ်ယာန်များသည် ဧဝံဂေလိတရားကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးရသော်လည်း ၎င်းတို့သည် အမြဲတမ်းအောင်နိုင်သူများဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြခဲ့သည်။
“အပြစ်တင်သောသူကား မည်သူနည်း။ အသေခံတော်မူသော ခရစ်တော်ကား၊ တဖန်ထမြောက်တော်မူသော၊ ငါတို့အတွက် ဆုတောင်းပေးတော်မူသော ဘုရားသခင်၏ လက်ျာတော်ဘက်၌ပင် ရှိတော်မူ၏။ ခရစ်တော်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ငါတို့ကို အဘယ်သူ ခွဲထုတ်မည်နည်း။ ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်း၊ အစာခေါင်းပါးခြင်း၊ အဝတ်အချည်းစည်းရှိခြင်း၊ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ကိုယ်တော်အတွက်ကြောင့် အကျွန်ုပ်တို့သည် တနေ့လုံး အသေသတ်ခြင်းကို ခံရပါ၏။ သတ်ခြင်းအတွက် ငါတို့သည် သိုးကဲ့သို့ မှတ်ကြပြီ။ မဟုတ်ပါဘဲ၊ ဤအရာများအားလုံးတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ်တော်မူသောသူအားဖြင့် အောင်နိုင်သူများထက် သာ၍များပါသည်။ အကြောင်းမူကား၊ သေခြင်း၊ အသက်၊ ကောင်းကင်တမန်များ၊ အထွဋ်အမြတ်များ၊ တန်ခိုးများ၊ ပစ္စုပ္ပန်အရာများ၊ နောင်လာမည့်အရာများ၊ အမြင့်၊ အနက်၊ အခြားသတ္တဝါတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အား မေတ္တာနှင့် မခွဲနိုင်စေရဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၌ရှိတော်မူသော ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။” ~ ရောမ ၈:၃၄-၃၉
စာတန်သည် ခရစ်ယာန်အတုများကို ခရစ်ယာန်စစ်များကို အောင်အောင်မြင်မြင် မသုံးနိုင်ခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် အနှစ် ၁,၀၀၀ အုပ်စိုးချိန်အတွင်း နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရသောခရစ်ယာန်များ၊ ခရစ်တော်သည် သူတို့၏စိတ်နှလုံးထဲတွင် “ဘုရင်တို့၏ဘုရင်၊ သခင်တို့၏သခင်” ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ (ဗျာဒိတ် ၁၉:၁၆).
ယနေ့ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို သင်မြင်နိုင်ပါသလား။ သို့မဟုတ် မြေကြီးဆိုင်ရာနိုင်ငံတော်ကို စောင့်မျှော်ဆဲဟူသော အယူအဆကြောင့် သင်သည် မျက်စိကွယ်နေပါသလား။ “မင်းဘဏ္ဍာတွေ ဘယ်မှာရှိလဲ၊ မင်းနှလုံးသားလည်း ရှိလိမ့်မယ်” ဆိုတာကို သတိရပါ။ ခရစ်တော်နှင့် ပညတ်တော်တို့ကို ချစ်မြတ်နိုးခြင်းသည် သင်၏ဘဏ္ဍာဖြစ်သလော သို့မဟုတ် သင့်စိတ်နှလုံးသည် မြေကြီးဆိုင်ရာအရာများကို တောင့်တနေပါသလား။
အမျိုးအစားများ မှားယွင်းသောသွန်သင်ချက်များ, ဗျာ _၂၀, သစ္စာနှင့် သစ္စာ, နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းသူ, TrueBible Doctrine တဂ် အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးမှု ပို့စ်ညွှန်း
ပြီးပြီ - လျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့် အပြစ်ကို ဖယ်ရှားလိုက်သည် - စစ်မှန်သောအသင်းတော်သည် ထင်ရှားလာပါသည်။
ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်း 20 – ဧဝံဂေလိမှတ်တမ်းမှတ်တမ်းကို ဖြောင့်ဖြောင့်သတ်မှတ်ခြင်း။